यसकारण सहज छैन प्रचण्डको ‘ प्रधानमन्त्री यात्रा भाग–२’ « Pahilo News
यसकारण सहज छैन प्रचण्डको ‘ प्रधानमन्त्री यात्रा भाग–२’
प्रकाशित मिति : 18 August, 2016 5:08 pm
२ भदौ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्री छनोटमा सन्तुलन नमिलाएको भन्दै माओवादी भित्रै तीव्र आलोचना सुरु भएको छ ।
माओवादीले नेतृत्वमा बाहुनवादी सोँच हावी भएको भन्दै एकथरीले आलोचना गरेका छन् भने अर्को थरीले आफूहरु अपमानित भएको भन्दै नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका छन् । यसरी नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरुमा महिला र मधेवादी सासंद बढी रहेका छन् ।
पहिलो न्युजसँग कुरा गर्दै सांसद सीता नेपालीले भनिन्– ‘हामी त त्यसै पनि अपमानित भएका छौँ, हामी लामो समयसम्म युद्ध लडेको प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि हो । हामीले लडेको लडाईँ महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति पिडछा वर्ग सबैको मुक्तिका लागि नै हो । तर, नेतृत्वको रबैया देख्दा हामीलाई दुःख लागेको छ । हामी लज्जित भएको छौँ ।’
पूर्व मन्त्री समेत रहेकी सांसद रेखा शर्मा पनि नेतृत्वको रबैयाबाट दिक्क छिन् । ‘यस पटकको मन्त्रीमण्डलमा अरु समुदायका त करिव सबै क्याबिनेटमा पर्नुभयो । त्यो स्वागत योग्य कुरा पनि भयो । तर महिला समुदाय जुन छुट्यो त्यो त्रुटीपूर्ण छ । बेठीक भएको छ,’ उनले भनिन् जुन कुरा हामीले बाहिर पनि भनिरहेका छौं । पार्टीमा पनि भनिएको छ । यसलाई सच्याउन माग गरेका छौं । वाश्तवमै यो सच्याउनै पर्ने विषय हो ।’
नेपाली त अझ नेतृत्वलाई चुनौति नै दिएर भनिन्– ‘म नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरुले कुन विधि र प्रक्रियाबाट मन्त्री छनोट गर्नुभयो र त्यहाँ महिलालाई अपमान गर्नु भो ?’ उनले महिलालाई असक्षम नठान्न पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘उहाँहरुले महिलालाई असक्षम ठान्नु भएको हो भने पनि भन्नुपर्यो । हामीले निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट नेपाली जनताले चाहेको संविधान जारी गरेका छौँ ।
संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका निकै महत्वपूर्ण थियो,’ उनले भनिन् ‘यदि हामीले संविधान निर्माणका चरणमा राम्रो भूमिका खेल्न सकेका थिएनौँ भने हामीलाई पार्टी नेतृत्वले किन त्यसैबेला कारवाही गर्न किन सकेन ? हामीलाई किन त्यसैबेला असक्षम घोषणा गर्न सकेन ? हामी त्यस्ता असक्षम नै थियौँ भने किन हामीलाई सभासद् बनाइयो ?’
यता मधेसी सांसद प्रभू साहको पनि गुनासो त्यहि छ । ‘मन्त्री पद पाउने–नपाउने कुरा ठूलो नभएको भन्दै उनले आफू पहिला पनि मन्त्री भएकाले मन्त्रीको रहर नभएको बताए । ‘म पहिला पनि मन्त्री भएको व्यक्ति हुँ । तर, अन्तिम समयमा आएर जुन तरिकाले पार्टी नेतृत्ववाटै अपमान गर्ने काम भयो, यसबाट भने चिन्ता लागेको ,’ उनले भने ‘मलाई नेतृत्वले ‘खाए खा नखाए घीच’ भन्ने ढंगले मैले नरोजेको र नरुचाएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि अस्वीकार गरेको हुँ ।’
नेपालीले राष्ट्र प्रमुख महिला, सभामुख महिला, प्रधानन्यायाधिस महिला देशले प्राप्त गर्नुको उपलब्धी शसस्त्र जनयुद्धको जग भएको भन्दै त्यहि पार्टीले अपमान गर्दा दुःख लागेको बताइन् । ‘मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वले जुन प्रवृत्ति देखाएको छ । ती सबै उपलब्धीको समेत अपमान भयो भन्ने हामीले ठानेका छौँ,’ नेपालीले भनिन्, ‘हामी विगतमा पनि लड्दै आएका थियौँ । अहिले पनि लडिरहेका छौँ । आगामी दिनमा पनि हामी लडिरहने छौँ ।’
शर्माले पनि सरकार समावेशी आधारमा बनाइनेछ भनिएको भएपनि नेतृत्वले केही हदसम्म अपमान गरेको दाबी गरिन् । ‘ समावेशीताको मूल पक्ष र मूल आधार भनेको महिला समुदाय नै हो । किनकी यो समाजको ५१ प्रतिशत छ । अरु समुदाय भन्दा यो सुमदाय आधारभूत रुपमा पनि अलि पृथक हो । त्यसैले महिलाहरु आउनैपर्छ भन्ने हो,’ उनले भनिन् ।
साहले त अहिलेको मन्त्री मण्डल छनोटले पार्टीलाई गम्भीर हानी हुने चेतावनी नै दिए । ‘अहिले तराई–मधेस, आदिवासी, जनजाति, महिला सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी पार्टी नेतृत्वले मन्त्री छनोट गरेको भए केही हदसम्म नेतृत्वप्रति देखिएको नकरात्मक धारणामा केही सुधार आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘ नेतृत्वको यो शैलीले त झन् समस्या सिर्जना गरेको अनुभूति भएको छ ।’ माओवादीका असन्तुष्ट सांसदहरुका यी भनाईले पनि प्रचण्डको बाटो निकै असहज छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पार्टी बाहिर पनि सकस
पार्टी भित्र त सहज छैन नै एमाले नेताहरुकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने छ महिनाका लागि विभिन्न ठाउँमा ल्याप्चे लगाएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका प्रचण्डलाई पार्टी बाहिर पनि सहज छैन । सत्ताका लागि हरेक खाले पासा पल्टाउन सक्ने नेपाली कांग्रेससँगको यो म्यादी यात्रा सफल होला भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार निकै कम छ । एमालेमा रहँदा निकै शक्तिशाली मन्त्रालयसहित निकै उच्च कदसहित रहेको माओवादीको कद अहिले निकै होचो छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ता सञ्चालनको साँचो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै हातमा छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा सत्ताको साँचो प्रचण्डको हातमा थियो । अहिले त्यो साँचो देउवाको हातमा पुगेको छ । यस कारण पनि प्रचण्ड पटक–पटक देउवाको तगारोमा पर्ने निश्चित छ । देउवाले भने अनुरुप नभएपछि उनले तगारो बन्द गर्ने छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड आफैले पनि आफूलाई ‘डमी’ प्रधानमन्त्रीमा भएको थाहा पाउने छन् ।